Stepper Motor, fametrahana mazava Sokiro Motor, Bioplar Stepper Motor - Asa
Roa-dingana, Efa-Dingana Hybrid Stepper Motor Driv ...
Roa-dingana, Efa-Dingana Hybrid Stepper Motor 34HS
Mihidy-Loop Stepper Driver HBS86H
Changzhou Asa Motor Co., Ltd naorina tamin'ny 2010, roa mpanamboatra zavamaniry. Ny famokarana isan-taona takatry ny 2 tapitrisa vondrona, ny mpiasa sy 50000 200 metatra toradroa trano fanatobiana entana. Tsy manana 1 Eoropeana biraon'ny sampana sy 2 ivelany anjara fanompoana ao Shina.
Taorian'ny folo taona mahery ny asa mafy, efa nandresy ny fitia maherin'ny 3.000 mpanjifa, ary bebe kokoa noho ny 850 mpanjifa manana mihoatra ny 5 taona.
Asa Motor no nahatsapa ny famokarana ny Indostria 4.0, matihanina kokoa ny famokarana, ary manome mihoatra ny 10.000 karazana vokatra safidy mba hihaona amin'ny ilain'ny mpanjifa amin'ny orinasa isan-karazany.
Manana 26 teknisiana, 15 izay efa mihoatra ny 10 taona miasa traikefa. 35 Manana ny varotra sy ny asa fanompoana manokana izay nentina nivoaka ny asa manokana fisaraham-bazana eo amin'ny mialoha ny fivarotana, rehefa avy-fivarotana, sy Ankehitriny-varotra mba hanatsarana ny kalitaon'ny ny fiaraha-miasa.
Manana 2 orinasa sy 2 birao any Shina. Tamin'ny 2014, dia naorina ny sampana any Alemaina. Ny fanompoana eran-warehousing ihany ny azo antoka sy mahomby fanaterana ny entana.
Izahay efa nanolorana azy ho amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana sy ny lenta ny vokatra, ary ny isan-taona fampiasam-bola amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana Mihoatra ny 10 tapitrisa yuan.
nema 23 Stepper Motor Driver , Stepper Motor Driver , Cnc Stepper Motor Driver Kit , Hafanàm-po an Stepper Servo Driver , Close Loop Stepper Motor Driver , nema 17 Stepper Motor Driver ,